LAGU SAMEEYO KSAN San Diego Sawir Qaadasho Real FSX & P3D - Rikoooo
KSAN San Diego Sawirka Sawirka dhabta ah FSX & P3D
downloads 15 646
Muuqaalkan Sawirka dhabta ah waa dib u dhis buuxa oo loogu talagalay FSX Khadka tooska ah ee KSAN adoo adeegsanaya nooca ugu dambeeyay ee ADE (v01.50.11) & Qalabka naqshadeynta muuqaalka SBuilderX. SAN waa mid ka mid garoomada diyaaradaha ee ugu jeceshahay in lagu duulo sababta oo ah muuqaalkeeda qurxoon, waxaana lagu darayaa #10 liiska "Garoomada Diyaaradaha Adduunka ee Ugu Khatarta badan". Muuqaalkan waxaa ka mid ah ballaarinta cusub ee Terminal 2 oo loo qorsheeyay in lagu dhammeeyo 2013, laakiin albaabada iyo qaab dhismeedka dhulka weli lama cusbooneysiin.
Waxaad heli doontaa update muuqaal ah sida ugu dhakhsaha badan files kuwa la heli karaa. Waxa kale oo ka mid ah dhismayaasha cusub ee terminal, dhismayaasha cusub ee ku taalla ee hab RWY 27, iyo Photo qaabab dhulka Real siinaya garoonka diyaaradaha dareen dheeraad ah oo macquul ah. Added qaar ka mid ah dhismayaasha Google Earth, bakhaarada cusub, iyo dhowr uqaadineed muuqaal fiican.
The runways iyo macawiso Garoonka ayaa lagu toosiyaa dhigma sawirka dayax-Google & Yahoo.
Diiwaangelinta iyo unregistering of muuqaal ah waa automatic ee Aadan Qabille. Si aad halkaas tago si fudud u galaan KSAN duurka ku "Airport ID".